Shina Traffic famantarana pole mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Light Pole > Traffic famantarana pole
Ny karazan-tsindrim-pamantaran'ny fifamoivoizana amin'ny ankapobeny dia manana tsanganana famantarana andalana tokana ary tsanganana marika marobe maromaro.
Ny sisin'ny tsanganana amin'ny tsanganana dia tsy hiditra amin'ny sisin'ny fanamboaran-dàlana, amin'ny ankapobeny tsy latsaky ny 25cm miala ny sisin'ny làlan'ny arabe na ny sisin'ny lalana na ny soroka maloto.
Ny haavon'ny arabe amin'ny làlan'ny takelaka famantarana fifamoivoizana dia mizara ho 5 500mm, ary ny lalam-pirenena sy ny làlan'ny faritany dia tsy latsaky ny 5000mm. Rehefa mametraka làlan-tanàna misy ampahany kely fiara kely, ny haavon'ny tendron'ny faran'ny ambany avy amin'ny tany dia mety ho mahomby araka ny toe-javatra iainana, fa tsy tokony ho latsaky ny 120cm izany.
Rehefa mametraka eo an-tsisin'ny mpandeha an-tongotra na tsy moto dia ny haavony dia lehibe kokoa noho ny 180cm.
Fametahana tsanganana eo amin'ny tsanganana tokana tokana: Ny tsanganana marika tsanganana tokana tokana dia boaty famantarana napetraka eo amin'ny tsanganana ho an'ny polisy kely sy kely
Fanamarihana, fandrarana, famantarana ary famantarana kely tondro.
Fametahana takelaka marika marobe isan-karazany: Ny takelaka famantarana takelaka marobe marobe dia takelaka famantarana napetraka napetraka eo amin'ny tsanganana roa na mihoatra, izay famantarana na tari-dalana ho an'ny zoro.
Paositra famantarana famantarana ny fiara fitaterana: cantilever sign sign
Ny paositra famantarana cantilever type dia boaty famantarana napetraka tamin'ny cantilever, ary ny haavon'ny faran'ny marika avy amin'ny tany dia tokony ho lehibe kokoa noho ny haavon'ny fanalavam-potoana voafaritry ny lalana.
Ny sonia Cantilever fifamoivoizana dia mety amin'ny tranga manaraka;
1. Sarotra ny fametrahana tsanganana;
2. malalaka ny làlana, midadasika ny fifamoivoizana, ary ireo fiara lehibe any amin'ny lalam-bahiny ivelany manakana ny fahitana kely ny lalana anatiny;
3. Ny faran'ny fahitana na ny tsipika eo amin'ny maso dia voafatotra;
4. Misy fepetra takin'ny tontolo.
Gantry famantarana famantarana fifamoivoizana - gantry fifamoivoizana
Ny takelon'ny fifamoivoizana gantry dia marika apetraka amin'ny gantry. Ny haavon'ny faran'ny ambany amin'ny famantarana avy amin'ny tany dia tokony ho lehibe kokoa noho ny haavon'ny fantsom-panondroana voafaritry ny làlana.
Ny takelon'ny fifamoivoizana gantry dia mety amin'ireto toe-javatra manaraka ireto:
1. Lalana marobe (amin'ny làlà telo na mihoatra) mila manondro ny làlan'ny lalana tsirairay;
2. Ny fitohanan'ny fifamoivoizana be, fiara lehibe any amin'ny lalam-be ivelany manakana ny fijerin'ny fiara kely amin'ny làlan'ny anatiny;
3. Ny fifamoivoizana dia ajanona amin'ny hafainganam-pandeha mihazakazaka kokoa, izay misy ny fifampitokonana, fanalehibeazana ary fizarana renirano. Ohatra dia mifanakaiky eo ny sisin'ny lakroa, ary mihamora ilay famantarana ary ny làlan'ny làlana sy ny làlan'ny lalana mankany amin'ny lalana mankany amin'ny lalana mankany amin'ny lalana;
4. Noho ny fanelingelenana amin'ny habaka, sarotra ny fametrahana tsanganana sy cantilever;
5. Ny sisin'ny fivoahana dia eo amin'ny lafiny ankavanan'ny valin'ny fifamoivoizana;
6. Misy fepetra takin'ny tontolo.
Fametahana takelaka mifehy ny fifamoivoizana: Ny famantarana dia miraikitra amin'ny tetezana ambony sy ireo rafitra eo akaikiny. Misy karazana karazany fanitarana sy karazana fanandramana amin'ny alàlan'ny fizahan-toetra arakaraka ny toeran'ny fandaharana napetaka.
Ny haavon'ny fametrahana ny famantarana mipetaka dia tokony hifanaraka amin'ny fepetra omen'ny GB3.12.1 sy GB3.12.3. Raha toa ka eo amin'ny faritra mazava ny rafi-panohanan'ny marika, dia tokony hiantoka izany fa ny fiara mandao ny lalana dia mampidi-doza. Raha tsy izany dia tokony ho raisina ny rafitra mifehy ny tohatra miendrika tohatra na fitaovana fiarovana sy fampitandremana mifanentana amin'izany.
fanaovana batisa nandrisika Road Traffic Sign Pole
Buy Traffic famantarana pole nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Traffic famantarana pole ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Traffic famantarana pole Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.